के गर्ने के नगर्ने डिनरपछि ? - ज्ञानविज्ञान
के गर्ने के नगर्ने डिनरपछि ?
बेलुकीको खाना खाइसकेपछि जंकफुड खाने गल्ती कहिल्यै गर्नु हुँदैन । कतिपयले खानापछि चिया-कफी लिने गर्छन्, जसलाई स्वस्थकर मानिँदैन । तर, सुत्नुअघि पिउने एक कप ‘ग्रिन टी’ले भने शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
-खाना खाइसकेपछि इभिनिङ वाक गर्दा शरीरलाई निकै फाइदा पुग्छ । यसो गर्दा पेटको एकै ठाउँमा खाना जम्मा हुन पाउँदैन र पेटको सम्भावित रोगबाट पनि बच्न सघाउ पुग्छ ।
Topics #जंकफुड #डिनर
Don't Miss it नरिवलको तेलको प्रयोगको बारेमा केहि कुरा, यस्ता छन्
Up Next भेंडे खुर्सानी लगाएतका खानेकुरा पकाएर खादा, यस्तो बेफाइदा
हतार गरेर खाना खानुहुन्छ ? यी कुराहरु थाहा पाइराख्नुहोस्
हामीमध्ये धेरैको स्वभाव हुन्छ, छिटो छिटो गाँस टिप्ने । गाँस टिप्ने मात्र होइन, निल्ने पनि । खानेकुरा मुखमा परेपछि निलिहाल्छौं…
दुध सामान्यतया हानीरहित पोषिलो पदार्थ हो भन्ने मानिन्छ । अझ भैसी भन्दा गाईको दुध जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैले पिउँन सकिने भनेर…
यसरी हटाउन सकिन्छ, आँखा वरिपरिको डार्क सर्कल
१. टमाटर : टमाटरमा पनि छाला चम्किलो बनाउने तत्व हुन्छ । एक चम्चा टमाटरको रस र एक चम्चा कागतीको रस…
हामी मध्य धेरै कमलाई मात्र थाहा होला कि संस्कृत भाषा संसारको सबैभन्दा बैज्ञानिक भाषा हो |
संस्कृत भाषा विश्वको सवैभन्दा प्राचीन भाषा मानिन्छ र यो भाषाको सबै भन्दा प्राचिनतम ग्रन्थ ऋग्वेद हो। संस्कृत भाषाका विद्धान पाणिनी…